Sczọ aghụghọ n'ịntanetị kachasị ewu ewu 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Site na mmepe nke teknụzụ, mkpa anyị na-agbakwasị ụkwụ na iji teknụzụ n'onwe ya, site na netwọkụ mmekọrịta na ịkparịta ụka n',ntanet, n'ịzụta ihe ịntanetị kachasị mfe nke ndụ kwa ụbọchị. Ya mere, ọ baghị uru ịkọwapụta na ọbụlagodi ndị aghụghọ ezuola usoro ha iji mee ka ndị ọrụ dara ogbenye n'aka ha. N'ezie, aghụghọ ịntanetị na-eji ọmịiko, egwu na anyaukwu nke ndị ọrụ Internet.
N'isiokwu a anyị ga-enyocha wayo kachasị gbasaa ma jikwaa ya na ụwa ntanetị.
G ALKWUO: Otu esi egbochi spam na SMS
1. Ikwere okwu na nkwa:
a na-arata ndị ahụ metụtara nkebi ahịrịokwu dị irè dị ka "zuru okè ọrụ dị nnọọ a click pụọ. Anyị na-enyere gị aka inweta ya"O"Ọrụ n'ụlọ ma irite okpukpu iri ọzọ!".
Otu n'ime ndị kacha mara amara, na-agba ọsọ ugbu a Facebook n'ihi na afọ ụfọdụ, ọ bụ ojoro nke Iwu mmachi Mezue ya na onyonyo ya na ọnụ ahịa ya dị oke ọnụ: nzuzu bụ aghụghọ a emeela ma na-aga n'ihu na-eme ọtụtụ ndị emetụtara, ndị ọnụahịa 19,99 dọtara, na-achọ ịpị oyiyi ahụ N'oge ndị a, a na-eduga onye ahụ aja kwenyere na site na ịnyefe ego ma ọ bụ asambodo ụlọ akụ ha, ha ga-enwe ike inweta ọrụ zuru oke na enweghị mbọ ma ọ bụ ngwaahịa na ego mbelata nke, n'ezie, agaghị erute.
2. collectiongwọ nchịkọta ọrụ:
N'okwu a, onye ahụ tara ahụhụ na-eche na site n'ịkwụ nchikọta ego nke ya na pesentị ihe n'ụgwọ, otu ndị mmadụ ga-eji aka ha lekọta ụgwọ niile. Ọ dịghị ihe nwere ike ịbụ ụgha karịa, ebe ọ bụ na onye ahụ a tara ahụhụ agaghị ahụ ka ụgwọ ya ji, mana, n'ụzọ megidere, ọ ga-ahụ onwe ya na nsogbu ka ukwuu
3. Ọrụ site n'ụlọ:
Netwọk anaghị ezochi ojoro, mana ọ bụghị ihe ọhụrụ ndị mmadụ na-enye ọrụ n'ụlọ ka ha ghara ịkwụwa aka ọtọ dịka ha yiri.
4. "Gbalịa ya n'efu":
... na n'efu mgbe ahụ ọ bụghị. Usoro ahụ gosipụtara na ndị aghụghọ na-ekwe nkwa iji ọrụ ma ọ bụ obere oge, na-akwụghị ụgwọ ọ bụla, mgbe ahụ nsogbu a ga - abụ ihe na - agaghị ekwe omume ka isiokwu wepu aha ya na sistemụ nke ha debara aha ya, na-amanye ịkwụ ụgwọ maka ihe. ya mere ọ nweghị mmasị.
5. "need chọrọ mgbazinye ego?":
Nke a bụ aghụghọ kachasị ochie nke ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ oge ugbua na ụgwọ, na-aga n'ihu na-ada n'ụzọ na-enweghị atụ. N'ezie, okwu ahụ "mbinye ego" eji n'ụzọ na-ezighi ezi dị ka synonym maka "usury"N'ezie, ọ na-emekarị na ndị na-esote onyinye ndị a na-arịọ maka ego iji mepee omume wee laa n'ime ikuku dị nro. N'ihe banyere ego mgbazinye ego na ego, ọ na-atụ aro ka ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ akụ na ụba ama ama.
6. theftmata njirimara:
O di nwute na odi mfe itinye ojoro ma juputa na oge nke netwọkụ ndi mmadu. E meela ka ịdị mfe nke ijide ndị ọzọ mara, mana nke kachasị njọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ, onye ahụ na-ata ahụhụ matara na ọ gafeela oge. N'echiche a, wayo akwụmụgwọ emere eme, n'eziokwu, na-arị elu ohi njirimara- Thegha ahụ gụnyere izu data nke onwe na nke ego wee jiri ya tinye maka mgbazinye ego ma ọ bụ zụta ihe na ntanetị; ihe niile na-emebi ndị ahụ nwere ike ịmata aghụghọ ahụ naanị mgbe, dịka ọmụmaatụ, ha na-anwa itinye akwụkwọ maka mgbazinye ego mana a jụrụ ha n'ihi akwụghị ụgwọ ndị ọrụ ahụ na-arụ. Yabụ, ọ dị mkpa ịkọrọ ndị isi eziokwu ahụ wee gaa n'ihu na arịrịọ iji gọnahụ ọrụ ahụ.
7. "I merie € 10.000!" ma ọ bụ "FREE iPhone 10 naanị maka gị ma ọ bụrụ na ị pịa ebe a!":
Kedu onye na-ahụtụbeghị mmapụta yiri nke a mgbe ị na-eme nchọgharị na weebụ? Have ga-echeta mgbe ịpị ịnye onyinye ndị a, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ kachasị mma ị ga-ebute nje mgbe, nke kachasị njọ, mmadụ nwere ike iledo PC gị, na-ezu ohi ozi niile dị mkpa iji nweta, dịka ọmụmaatụ, ka akụ gị. .
G ALKWUO: Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na saysntanetị ekwu “Ekele, ị meriri”; esi zere ma ọ bụ gbochie ya
8. Kpọọ 800 ***** ma chọpụta onye nzuzo nzuzo gị bụ ":
... ma ọ bụghị Fans; Mgbe ị na-akpọ nọmba ndị a, n'eziokwu, naanị njikọ njikọ nwere ike ịfu nnukwu ihe yana ọrụ ị na-achọghị nwekwara ike ịkwụ ụgwọ na-enweghị atụ.
9. Ahịa na Web:
n'okwu a ọ dị mma ịtụkwasị obi mgbe niile ukara saịtị ed nyere ikike zụta na ire na webụ. N'ezie, ọ bụ akara a maara nke ọma ma mara nke ọma, ọ dị mfe ọ ga-abịa na saịtị ndị na-ezu ohi akara na ozi nke akara a na-ekwu okwu, wee nyefee ngwaahịa ndị nwere nkwarụ nye ndị na-adịghị mma nọ n'ọrụ ma ọ bụ ọbụlagodi ngwaahịa a zụrụ abụghị. enyefeghi onye natara ya. Mgbe ị banyere, ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịpụta ọdịdị nke mbụ, mana eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ngwa ahịa dị 50% kwụsịrị kwesịrị ịmụrụ anya ịkpọ oku maka aghụghọ ojoro.
G ALKWUO: Otu esi azụta na eBay zere aghụghọ
10. Wayo Email na Business Fraud:
bụ ụfọdụ ụdị aghụghọ ọhụrụ nke kachasị emetụta ụlọ ọrụ, nke ndị omekome na-abanye na nkwukọrịta azụmahịa ha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ nke ndị njikwa nke otu ụlọ ọrụ ahụ yana, yana ozi ụgha mana ndị a tara ahụhụ na-ewere dị ka ndị kwesiri ekwenye , ibugharịa nnukwu ego iji chọpụta akaụntụ na aha ndị scammers.
G ALKWUO: Ghọta ozi ịntanetị adịgboroja, aghụghọ na nke na-abụghị ezigbo ya
na-esite na njikọ dị n'etiti echiche nke "olu" mi "Amata wayo" na ọ bụ a ojoro na Aims na ikpokọta ihe ọmụma nke ndị ọrụ 'onwe data na ojiji nke ekwentị oku na-eduhie ha.
A ngosi rutere na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ na igbe akwụkwọ ozi nke ndị ahụ metụtara, o doro anya na site na ụlọ ọrụ ha na-akwụ ụgwọ, na-ekwupụta azụmahịa na-enyo enyo metụtara akaụntụ ha: onye ọrụ ahụ ịdọ aka na ntị metụtara na adreesị ofntanetị nke saịtị cloned na na Isi okwu a na-enweta oku ekwentị, nke ọnụ ọgụgụ na-enweghị ego na-enweghị ego, nke ndị aghụghọ ahụ na-eme ka ha bụ ndị ọrụ ụlọ akụ na-achọ ịkwụsị izu ohi ma, ozugbo enwetara koodu nnweta, ha na-enye ikike inyefe ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ n'azụ onye ahụ.
12. Agagharị ego aghụghọ:
la Ozi nke gburugburu katọrọ otú ọtụtụ akụkọ si bịarute n'oge na-adịbeghị anya, site n'aka ndị bu n'obi iji uru nke agagharị agagharị banyere ịdị adị nke ngwa dị iche iche na-ezube iduhie ndị ọrụ site na aha nnabata. "Akwụkwọ ikike mbugharị 2020". Ngalaba ahụ na-ekwupụta otu esi ekwupụta usoro iji rịọ maka ego ahụ site na ọwa gọọmentị ọtụtụ ụbọchị tupu ụbọchị izipu ngwa ahụ. Edeelarịrị ngwa ngwa aghụghọ nye ndị isi ruru eru.
Ransomware bụ ụdị aghụghọ nke ndị ohi na-etinye malware na kọmputa ma ọ bụ sistemụ kọmputa nke na-egbochi onye ọ bụla ịnweta faịlụ ha site na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ihe mgbapụta, na-abụkarị ụdị bitcoin, iji kagbuo ya. Adị aghụghọ ransomware ọnyà nwekwara ike ịbụ ihe na-emerụ ahụ: ihe kacha njọ dị njọ dị na mgbapụta ransomware na-emebi echiche nke nchekwa na nzuzo, yana n'ụdị dị egwu, ndị na-agba ọsọ na-ekwu site na email na ha hafuru igwefoto. Weebụ mgbe onye ahụ a na-ata ahụhụ nọ na-ele ihe nkiri. ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Mgbasa ozi cam-hacking ahụ, nke a na-akwado site na ikwughachi paswọọdụ onye ọrụ na email, bụ ụzọ nke ozi ojii: ma ị zitere anyị bitcoins ma ọ bụ anyị zigara vidiyo ahụ na kọntaktị gị niile. N'ikwu eziokwu, nke a bụ nhazi dị ọcha - ndị scammers ahụ enweghị faịlụ vidiyo ma ọbụnadị abanyela na ozi gị, dịka okwuntughe ha na-ekwu na ha nwere na-anakọtara site na ọdụ data ọha na eze dị na okwuntughe na ozi ịntanetị.
Na mgbakwunye na ịmụrụ anya, ndị ọkachamara na-atụ aro ihe ndị a:
tupu ị banye na kaadị akwụmụgwọ gị nkọwa na saịtị, ịkwesịrị inyocha ya nchekwa;
Ike ziga Koodu nnweta ha na akaụntụ nnabata - ụlọ akụ, n'eziokwu, dịka ọmụmaatụ, ajụlala nzere nbanye ụlọ ụlọ site na email ma ọ bụ ekwentị;
nwere ịkpachara anya mgbe achọrọ iziga akwụkwọ nke akwụkwọ;
Ebudatala Ike Mgbakwụnye na-abata site na email ma ọ bụ ozi ederede ma ọ bụrụ na ejighi n'akanjirimara si onye ziri ozi;
maka ụdị obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla na-akpọtụrụ ndị ikike tozuru etozu.
Na nke a anyị na-agbakwunye ohere nke iji mmemme Anti-Ransomware megide nje Ransom ma ọ bụ Crypto
G ALKWUO: Ebe nrụọrụ weebụ na-aghọ aghụghọ na ntanetị n'ịntanetị
Nweta nsogbu na SPID: otu esi edozi ha
Esi lelee ma ngwa APK bụ nje
Chọpụta ma igwefoto gị ma ọ bụ kamera gị abanyela na nledo
Otu esi arịọ ma nweta SPID
Esi lelee ma ọ bụrụ na mmadụ ejirila ekwentị m
Kedu ihe bụ malware na otu ọ dị ize ndụ?
Mmemme nche Microsoft nke Windows 10 na 7
Etu uzo esi egbochi saịtị intaneti site na PC, Mac, smart na mbadamba
Nweta okwuntughe, siri ike na akpaka na Chrome
Otu esi ehichapụ ihe ndekọ olu sitere na Alexa na Google Assistant
Otu esi eme ka igwefoto weebụ rụọ ọrụ mgbe ịgbanye PC na akpaghị aka